Ny alin’ny 31 janoary ireo jiolahy no niditra avy amin’ny lakandrano avy any amin’ny Marais Masay ka nipoitra ao anatin’ity trano fivarotana ity. Nitondra krika izy ireo avy eo nanainga ireo talatalana misy ny legioma mba hahafahan’izy ireo mitsofoka. Manodidina ny 10 tapitrisa ariary ny tetibidin’ny zavatra lasa tamin’izany.
« Coffre » iray an’ny trano fivarotana kely tao anatin’ny Jumbo no tena lasibatra. Novakian’ireo jiolahy efatra ilay izy ka vola 5 tapitrisa ariary sy fahana finday manodidina ny 5 tapitrisa ariary ihany koa no tao anatiny, miampy « puce » vitsivitsy. « Niaiky sy nitantara ny heloka nataony ireo jiolahy rehefa nosamborina nanomboka ny alahady teo », hoy ny kaomisera Randrianjafy Nicols, lehiben’ny Sut (Sureté urbaine de Tananarive) tetsy Tsaralalàna omaly.
Tsy nisy tafaverina avokoa ireo zavatra very ary araky ny famotorana dia nalefan’izy ireo any Antsiranana avokoa na ireo vola na ireo fahana finday. Ny efatra tamin’ireo jiolahy no nandray anjara mivantana, saingy ny iray fahadimy voasambotra kosa dia nampiasa ny « puce » isan’ireo halatra.
« Tamin’ny alalan’ny antso natao tamin’ilay « puce » no nahafahana nisambotra ireo jiolahy ireo, izay mpanera sy mpibata entana amin’ny kamiao etsy Ampasika avokoa », hoy ihany ireo polisy nanao ny famotorana. Natolotra ny Fitsarana omaly ireo voampanga ary naiditra am-ponja avokoa.